ပြင်သစ်-ခရိုအေးရှားအသင်းတို့ကစားမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းများ
15 Jul 2018 . 4:43 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် အခုည(၉း၃၀)အချိန်ကျရင် ဥရောပထိပ်သီး ပြင်သစ်နဲ့ နာမည်ကြီး ခရိုအေးရှားအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ဒဏ်ရာ၊ ပွဲပယ်ပြဿနာ၊ ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်မှတ်တမ်းတွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲတုန်းက ဟာဇက်နဲ့ထိခိုက်မိပြီး လူစားလဲခံခဲ့ရတဲ့ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူ မာတွီဒီဟာ အခုပွဲမှာ ပွဲထွက်ကစားအဖြစ်ပါဝင်ကစားနိုင်မှာပါ။ အင်္ဂလန်နဲ့ပွဲတုန်းက ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဘရိုဇိုဗစ်ကို နည်းပြဒါလစ်က ပထမကစားသမားအဖြစ် အသုံးပြုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ ရုရှားကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ယူကရိန်းကို အားပေးထောက်ခံတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ ခရိုအေးရှားနောက်ခံလူ ဗီဒါကို ဖီဖာက အရေးယူမှာ မဟုတ်လို့ အခုပွဲမှာ ပါဝင်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ၀ါရင့်တောင်ပံကစားသမား ပါရီဆစ် ပေါင်ဒဏ်ရာရှိနေတာကြောင့် ဒီပွဲမှာ ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်နိုင်ဖို့ရှိ၊ မရှိ မသေချာသေးပါဘူး။
-ပြင်သစ်နဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်းတို့ဟာ စုစုပေါင်း(၅)ကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ပြင်သစ်အသင်းက ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘဲ (၃)ပွဲနိုင်၊ နှစ်ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။
-အဲဒီ(၅)ကြိမ်ထဲက (၂)ပွဲဟာ အဓိက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့စဉ်က ပြင်သစ်အသင်းဟာ (၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီး ယူရို-၂၀၀၄ အုပ်စုအဆင့်မှာတော့ (၂)ဂိုးစီသရေကျခဲ့တယ်။
-နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲ(၃)ကြိမ်(၂၀၀၆၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄)စလုံး သာမန်ပွဲကစားချိန်မိနစ်(၉၀)မှာ အဖြေမပေါ်ခဲ့ဘဲ အချိန်ပိုဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေက ၁၉၉၄၊ ၂၀၀၆ နှစ်ကြိမ်တည်းသာရှိပြီး ဘရာဇီးလ်၊ အီတလီအသင်းတွေ ဗိုလ်စွဲခဲ့တယ်။
-ပြင်သစ်အသင်းဟာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းကနေ ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိ ပြိုင်ဘက်ကို ဦးဆောင်ဂိုးပေးခဲ့ရတာ အာဂျင်တီးနားနဲ့တစ်ပွဲသာရှိခဲ့ပေမယ့် ခရိုအေးရှားအသင်းကတော့ ပွဲတိုင်း ပြိုင်ဘက်ကို ဦးဆောင်ဂိုးပေးခဲ့ရပြီးမှ နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ရတယ်။
-ပြင်သစ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူးဂရစ်ဇ်မန်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ယူရို ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်(၉)ပွဲမှာ သူပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ဂိုးက(၁၁)ဂိုးအထိရှိပြီး နှစ်ပေါင်း(၅၀)အတွင်း ဇီဒန်း(၈ကြိမ်)၊ ပလာတီနီ(၆ကြိမ်)တို့ထက် ပိုမိုများပြားခဲ့ပါတယ်။
-ပြင်သစ်အသင်း လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ဘာပေဟာ အခုဗိုလ်လုပွဲမှာသာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ရင် ပီလီ(၁၉၅၈)နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်ုပွဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဘာပေဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ (၃)ဂိုးသွင်းထားတာကြောင့် ၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပီလီ (၆)ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း သွင်းဂိုးအများဆုံးဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နေပါတယ်။
-ပြင်သစ်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကို (၃)ကြိမ်မြောက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဘရာဇီးလ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ အာဂျင်တီးနား၊ နယ်သာလန်တို့ရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ တူညီသွားခဲ့ပါပြီ။
-ခရိုအေးရှားအသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ (၁၃)သင်းမြောက်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်သင်း(စပိန်၊ အင်္ဂလန်)စလုံး ဗိုလ်စွဲခဲ့တယ်။
-တကယ်လို့ ခရိုအေးရှားအသင်းသာ ဗိုလ်လုပွဲမှာ အချိန်ပိုထိကစားပြီး အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းကစပြီး ဗိုလ်လုပွဲအထိ အချိန်ပို(၄)ပွဲဆက်ကစားပြီးမှ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်မှာပါ။
-၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပြင်သစ်နောက်ခံလူတွေ သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးအရေအတွက်က (၃)ဂိုးရှိပြီး ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ပွငျသဈ-ခရိုအေးရှားအသငျးတို့ကစားမယျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ မှတျတမျးမြား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအဖွဈ အခုည(၉း၃၀)အခြိနျကရြငျ ဥရောပထိပျသီး ပွငျသဈနဲ့ နာမညျကွီး ခရိုအေးရှားအသငျးတို့ ယှဉျပွိုငျကစားမှာဖွဈပါတယျ။ နှဈသငျးစလုံးရဲ့ ဒဏျရာ၊ ပှဲပယျပွဿနာ၊ ဒီပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြမှတျတမျးတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ဘယျလျဂြီယံနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲတုနျးက ဟာဇကျနဲ့ထိခိုကျမိပွီး လူစားလဲခံခဲ့ရတဲ့ ပွငျသဈကှငျးလယျလူ မာတှီဒီဟာ အခုပှဲမှာ ပှဲထှကျကစားအဖွဈပါဝငျကစားနိုငျမှာပါ။ အင်ျဂလနျနဲ့ပှဲတုနျးက ခွစှေမျးပွကစားခဲ့တဲ့ ကှငျးလယျလူ ဘရိုဇိုဗဈကို နညျးပွဒါလဈက ပထမကစားသမားအဖွဈ အသုံးပွုသှားဖို့ရှိနပေါတယျ။ ရုရှားကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ယူကရိနျးကို အားပေးထောကျခံတဲ့ ရုပျသံဖိုငျကို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှပေျေါ ထုတျလှငျ့ပွသခဲ့တဲ့ ခရိုအေးရှားနောကျခံလူ ဗီဒါကို ဖီဖာက အရေးယူမှာ မဟုတျလို့ အခုပှဲမှာ ပါဝငျကစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခရိုအေးရှားအသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမားတဈဦးဖွဈတဲ့ ဝါရငျ့တောငျပံကစားသမား ပါရီဆဈ ပေါငျဒဏျရာရှိနတောကွောငျ့ ဒီပှဲမှာ ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈ ပါဝငျနိုငျဖို့ရှိ၊ မရှိ မသခြောသေးပါဘူး။
-ပွငျသဈနဲ့ ခရိုအေးရှားအသငျးတို့ဟာ စုစုပေါငျး(၅)ကွိမျဆုံတှခေဲ့ဖူးပွီး ပွငျသဈအသငျးက ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘဲ (၃)ပှဲနိုငျ၊ နှဈပှဲသရကေခြဲ့တယျ။
-အဲဒီ(၅)ကွိမျထဲက (၂)ပှဲဟာ အဓိက နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲကွီးတှဖွေဈတဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ယူရိုပွိုငျပှဲတှမှော ဆုံတှခေဲ့တာပါ။ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ဆုံတှခေဲ့စဉျက ပွငျသဈအသငျးဟာ (၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့ပွီး ယူရို-၂၀၀၄ အုပျစုအဆငျ့မှာတော့ (၂)ဂိုးစီသရကေခြဲ့တယျ။
-နောကျဆုံး ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲ(၃)ကွိမျ(၂၀၀၆၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄)စလုံး သာမနျပှဲကစားခြိနျမိနဈ(၉၀)မှာ အဖွမေပျေါခဲ့ဘဲ အခြိနျပိုဆကျကစားခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျမှာတော့ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံခဲ့ရတဲ့ ဗိုလျလုပှဲတှကေ ၁၉၉၄၊ ၂၀၀၆ နှဈကွိမျတညျးသာရှိပွီး ဘရာဇီးလျ၊ အီတလီအသငျးတှေ ဗိုလျစှဲခဲ့တယျ။
-ပွငျသဈအသငျးဟာ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးကနေ ဆီမီးဖိုငျနယျအထိ ပွိုငျဘကျကို ဦးဆောငျဂိုးပေးခဲ့ရတာ အာဂငျြတီးနားနဲ့တဈပှဲသာရှိခဲ့ပမေယျ့ ခရိုအေးရှားအသငျးကတော့ ပှဲတိုငျး ပွိုငျဘကျကို ဦးဆောငျဂိုးပေးခဲ့ရပွီးမှ နောကျကလိုကျကစားခဲ့ရတယျ။
-ပွငျသဈအသငျးရဲ့တိုကျစဈမှူးဂရဈဇျမနျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ယူရို ပွိုငျပှဲတှရေဲ့ ရှုံးထှကျအဆငျ့ပှဲစဉျ(၉)ပှဲမှာ သူပါဝငျပတျသကျခဲ့တဲ့ ဂိုးက(၁၁)ဂိုးအထိရှိပွီး နှဈပေါငျး(၅၀)အတှငျး ဇီဒနျး(၈ကွိမျ)၊ ပလာတီနီ(၆ကွိမျ)တို့ထကျ ပိုမိုမြားပွားခဲ့ပါတယျ။
-ပွငျသဈအသငျး လူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမား ဘာပဟော အခုဗိုလျလုပှဲမှာသာ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ရငျ ပီလီ(၁၉၅၈)နောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျုပှဲမှာ အသကျအငယျဆုံးဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမွောကျကစားသမားဖွဈလာမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ဘာပဟော ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ (၃)ဂိုးသှငျးထားတာကွောငျ့ ၁၉၅၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ပီလီ (၆)ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဆယျကြျောသကျကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျနပေါတယျ။
-ပွငျသဈအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲကို (၃)ကွိမျမွောကျရောကျရှိခဲ့ပွီး ဘရာဇီးလျ၊ ဂြာမနီ၊ အီတလီ၊ အာဂငျြတီးနား၊ နယျသာလနျတို့ရဲ့မှတျတမျးနဲ့ တူညီသှားခဲ့ပါပွီ။
-ခရိုအေးရှားအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲကို တကျရောကျခဲ့တဲ့ (၁၃)သငျးမွောကျဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲကို ပထမဆုံးအကွိမျတကျရောကျခဲ့တဲ့နှဈသငျး(စပိနျ၊ အင်ျဂလနျ)စလုံး ဗိုလျစှဲခဲ့တယျ။
-တကယျလို့ ခရိုအေးရှားအသငျးသာ ဗိုလျလုပှဲမှာ အခြိနျပိုထိကစားပွီး အနိုငျရခဲ့မယျဆိုရငျ ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးကစပွီး ဗိုလျလုပှဲအထိ အခြိနျပို(၄)ပှဲဆကျကစားပွီးမှ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျမှာပါ။
-၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပွငျသဈနောကျခံလူတှေ သှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုးအရအေတှကျက (၃)ဂိုးရှိပွီး ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈခဲ့တယျ။